गर्भावस्थामा पौष्टिक तत्व - स्वास्थ्य - प्रकाशितः माघ ७, २०७६ - नारी
गर्भावस्थामा पौष्टिक तत्व
- सुनैना डिओजू, पोषणविद्
गर्भावस्थामा महिलाको शारीरिक र हार्मोनल परिवर्तन हुन्छ । गर्भावस्थामा महिलाको खानपान गर्ने तरिकाले उनी र उनको शिशुको स्वास्थ्यलाई असर गर्छ । त्यसैले गर्भावस्थामा सन्तुलित आहार सेवन गर्नुपर्छ । गर्भवती महिलाले खाएको खाना शिशुको पोषणको मुख्य स्रोत हो । पोषक तत्वले भरपूर भएको खानेकुराको सेवन गरेमा शिशुको वृद्धि विकासमा मद्दत गर्छ ।
सामान्य अवस्थामा भन्दा गर्भावस्थामा पोषक तत्वमा वृद्धि गर्नुपर्छ त भनिन्छ तर कुन खाना कति खाने भन्ने कुराको ज्ञान कमैलाई मात्र हुन्छ । सन्तुलित आहार लिनलाई एक दिनमा कुन खानेकुरा खाने र मात्रा कति हुनुपर्छ ?
गर्भावस्थाको समयमा महिलालाई पोषणको आवश्यकता बढी हुन्छ । शिशु र आमा दुवैलाई थप माइक्रोन्यूट्रिएन्ट र म्याक्रोन्यूट्रिएन्टको आवश्यकता पर्छ ।
माइक्रोन्यूट्रिएन्ट (सूक्ष्म पोषकतत्व) आहारको भाग हो । गर्भावस्थामा भिटामिन र खनिज तत्व थोरै मात्रामा आवश्यक हुन्छ । म्याक्रोन्यूट्रिएन्ट्स पोषक तत्व हो, जसले क्यालोरी वा ऊर्जा प्रदान गर्छ । यसमा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र फ्याट समावेश हुन्छ । गर्भावस्थामा हरेक प्रकारको पोषक तत्वको बढी उपभोग गर्नुपर्छ ।
गर्भवती महिलाहरूलाई पोषणको आवश्यकता बढी हुन्छ । बढेको पोषण आवश्यकता पूर्ति गर्न स्वस्थ खाद्यपदार्थ समावेश गर्नुपर्छ । आवश्यक पोषक तत्व सुनिश्चित गर्ने एक सरल विधि भनेको प्रत्येक दिन खानामा फरक–फरक खाद्यपदार्थको सेवन गर्नु हो । भोजनमा कम्तीमा तीन फरक समूहको खाना समावेश हुनुपर्छ ।
प्रत्येक खानामा गर्भवती महिलाले शरीरका लागि उपयोगी पोषक तत्व प्राप्त गर्छन् । उदाहरणका लागि अन्न ऊर्जाको एक राम्रो स्रोत हो । फलफूल र तरकारी एन्टिअक्सिडेन्टको राम्रो स्रोत हो । यी फाइबर र पानीमा घुलनशील फ्याट र घुलनशील भिटामिनहरूले भरिपूर्ण हुन्छन् । प्रोटिन, फोलेट र आइरनका लागि मासु, ड्राइ फ्रुट्स, फलफूलको सेवन गर्नुपर्छ । डेरी उत्पादन क्याल्सियम र भिटामिन ‘डी’ को महान् स्रोत हो ।
आमा र गर्भस्थ शिशुको स्वास्थ्यका लागि कस्तो खानेकुरा समावेश गर्नुपर्छ ?
प्रोटिन : प्रोटिन मस्तिष्क र भ्रूणको उचित वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । यसले गर्भावस्थामा स्तन र गर्भाशयको तन्तुको वृद्धिमा मद्दत गर्छ । प्रोटिनले बढ्दो रगत आपूर्तिमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । शिशुलाई रगत सप्लाई गर्न सहयोग गर्छ ।
गर्भवती महिलाले दैनिक तीन पटक खानामा प्रोटिनयुक्त खाना समावेश गर्नुपर्छ । प्रोटिनको राम्रो स्रोत भएको खानेकुरा मासु (सुँगुर र कुखुराको), सिमी, साल्मन, ड्राइ फ्रुट्स, पिनट बटर, पनिर हुन् ।
क्याल्सियम : क्याल्सियमले बच्चाको हड्डी निर्माण गर्न मद्दत गर्छ र गर्भवती महिलाको शरीरमा भएको तरल पदार्थहरूको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्छ । गर्भवती महिलाहरूलाई कम्तीमा तीन पटक क्याल्सियम प्रतिदिन आवश्यक पर्छ । किशोरावस्थाको गर्भावस्थामा भने क्याल्सियम दैनिक पाँच पटक हो । क्याल्सियमका राम्रा स्रोत भनेका दूध, दही, चीज, बन्दाकोभी, तोफु, अण्डा, खिर, फोलेट आदि हुन् ।
फोलेट (फोलिक एसिड) : जसलाई फोलिक एसिड पनि भनिन्छ । यसले ‘न्युरोल ट्युब डिफेक्ट’ को जोखिम कम गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । स्पाइना बिफिडा र एन्सेसेफली जन्मजात विकृति हुन् जसले शिशुको दिमाग र मेरुदण्डमा असर गर्छन् । गर्भवती महिलालाई दैनिक ६ सयदेखि ८ सय माइक्रोग्राम फोलेटको आवश्यकता हुन्छ । फोलेट पाइने खानाहरूमा कलेजो, ड्राइ फ्रुट्स, सुकेका गेडागुडी, दाल, अण्डा, पिनट बटर, गाढा हरिया पात भएका तरकारीहरू हुन् ।
फलाम : फलामले सोडियम, पोटासियम र पानीका साथै रगत प्रवाह बढाउने काम गर्छ । यसले गर्भवती महिला र बच्चा दुवैलाई पर्याप्त अक्सिजनको आपूर्ति गर्छ । एकदिनमा २७ मिलिग्राम फलामको आवश्यकता पर्छ । पोषक तत्वका राम्रा स्रोतहरू भनेका गाढा हरिया पात भएका तरकारीहरू, अमिलो फल, रोटी वा अन्न, कुखुराको मासु, अण्डा एवं सुकेका फलहरू हुन् ।
वैशाख १७, २०७७ - जंकफुड खुवाएर छोराछोरीलाई रोगी बनाउँदै छन् अभिभावक
फाल्गुन २२, २०७६ - गर्भावस्थाको पोषण
माघ २६, २०७६ - गर्भावस्थामा योग
पुस २३, २०७६ - गमलाको बगैंचा
पुस १८, २०७६ - मुटु रोगीका लागि उपयुक्त आहार
समयमै उपचार : स्तन क्यान्सरको निदान कार्तिक २, २०७८
संस्कृति, भोजन र स्वास्थ्य आश्विन ४, २०७८
समयमै गरौं प्रसव तयारी भाद्र ११, २०७८
स्वास्थ्य बीमाले सहज श्रावण १०, २०७८
‘ब्ल्याक फंगस’को जोखिम श्रावण ८, २०७८
‘बुद्धि बंगारा ढुक्क भएर फाल्दा हुन्छ’ जेष्ठ ११, २०७८